पानीको बोतलमा समेत ओली बा !:: Mero Desh
पानीको बोतलमा समेत ओली बा !
Published on: १५ आश्विन २०७८, शुक्रबार १४:४१
अहिले गोदावरीको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन चलिरहेको छ ।
महाधिवेशन भव्य रुपमा भइरहेको छ । महाधिवेशनमा उपस्थितहरुका लागि विभिन्न परिकारका खानाको व्यवस्था छ । मटन खाना खानेलाई मटन खाना, चिकेन खाना खाना खानेलाई चिकेन खाना र अन्य थुप्रै परिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
खाना खाने वा महाधिवेशनमा उपस्थित भएकाहरुलाई प्यास मेट्नका लागि बोतलमा छुट्टै पानीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, बोतल सामान्य छैन । बोतलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लोगोलाई हेर्दै पानी पिउन पाइने छ ।
बोतलको बाहिरी आवरणमा अध्यक्ष ओलीले हात हल्लाइरहेको देखिन्छ । फोटोसँगै लेखिएको छ–नेकपा एमाले प्रथम विधान महाधिवेशन बोतलमा अध्यक्ष ओली अं’कित रहेको मिनेरल वाटार गोदावरी मिनरल वाटर प्रोडक्ट कम्पनीले उत्पादन गरेको हो । बोतलको पानी १ लिटरको रहेको छ ।
कार्यक्रमको सुरुमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव समेत रहेका शेरबहादुर तामाङले ओलीअंकित बोतलको पानी झोलामा राख्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त बोतलमा अध्यक्ष ओलीको लोगो टाँसिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि भा’इ’रल भएको छ ।